Thursday May 16, 2019 - 11:22:27 in Articles by Hadhwanaag News
sadaqadu waa shay aad qiimo badan oo heerkeeda ad u sarreeyo.waan shayga
uu eebbe weynana ugu jecelyahay.sida aynu xadiiskanba ku arki karayno : ( camal laqabto ilaahay wuxuu ugu jecelyahay mu,amin laga farxiyo, sidoo kale in dayn laga bixiyo , oo gaajadana laga bi,iyo , amaba kurbo kale oo haysta laga dulqaado)
sadaqadu falsafad ahaan waxba kama nusqaamuso maalka,waxana ay u dawo tahay cuduro badan,siduu rasuullkuba yidhi kudaweeya kiina buka sadaqada.
Waxana la ogaadayba inay ka faydo dadka karbooyinka iyo ballaayada, sidoo kale haddaad dhuuxdo xadiisyada oo aad ku tataburto waxay kuu sheegayanaan inay sadaqadu hor joogsato toddobaatan meelood oo qofka xumaan uga soo socota.
Rasuulkuna wuxuu ahaa ka dadka ugu deeqsisan marka ramadaanta la gaadhana ka ugu sii deeqsisan naxariis iyo nabad galiyo karkiisa ha yeelee eebbee.
Alla weyne subxaanahuu watacalaa dadka wax sadaqaysta wuu u libin laaba u barakeeyaa,darajo weyn iyo meel uuna wax ka filayn ayuu kasiiyaa.
siduu rasuulka amaanay dadka sadaqada bixiya inay mar walba dheeryihiin dadka kale waxbadan.
Haddaba maqaalkayga maanta waxaan kusoo gabagabaynayaa hala ogaado masaakiinta si miisanka xasanaadkaagu kor ku ahaado